Fiparitahan’ny valanaretina :: Manao fitiliana maro mikasika ny pesta ny “Institut Pasteur de Madagascar” • AoRaha
Fiparitahan’ny valanaretina Manao fitiliana maro mikasika ny pesta ny “Institut Pasteur de Madagascar”
Mirongatra ny aretina pesta. Hatramin’ny tapaky ny volana aogositra no efa naharay tranga natao hanamarininina mikasika ny pesta ny ao amin’ny “Institut Pasteur de Madagascar” (IPM). Fantatra fa betsaka ireo tranga nampiahiahy voarain’izy ireo tao anatin’izay iray volana izay saingy latsaky ny folo ihany no voamarina fa pesta.
Saika ny pesta atodintarina ny ankamaroan’izy ireo araka ny fanazavana saingy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka no manana ny tarehimarika mikasika an’ireo tranga vaovao. Tsy nanome fanazavana fanampiny momba ny trangana pesta niseho taorian’ny 3 septambra 2019 kosa anefa ireo tompon’andraikitra eo anivon’io minisitera io, raha nanontaniana.
“Efa miha mirongatra ny pesta satria ao anatin’ny vanim-potoana fisiany isika izao. Ireo faritra tena ahitana an’ity valanaretina ity hatramin’izay ihany no tena nisian’ny olona voa sy noahiahiana betsaka indrindra”, hoy ny Dr Rajerison Mino, talen’ny vondrona misahana ny aretina pesta ao amin’ny “IPM”, nandritra ny fanombohan’ny atrikasa handinihana an’ireo otrikaretina “yersenia” teny Ampefiloha , omaly. Ity otrikaretina ity no anisan’ny mitondra ny pesta.
Notsindrian’io loharanom-baovao io fa efa mihamora ny fitiliana ny pesta noho ny fisian’ny fitaovana ary fomba entina miatrika an’izany. Anisan’ny hanampy amin’ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana an’io aretina io ihany koa anefa ny fisian’ny atrikasa izay tanterahina eny Ampefiloha io.
“Misy ny famoahana voka-pikarohana ao amin’ity atrikasa ity. Karazan’aretina maro no resahina ao ka singanina manokana amin’izany ny pesta. Firenena efatra amby roapolo no mandray anjara amin’izany”, hoy hatrany Rajerison Mino.
Fanatsarana ny fitaterana :: Azo hatao ny mamandrika taksiborosy amin’ny tranonkala
Hopitaly Joesph Ravoahangy Andrianavalona :: Mitombo isa ny razana tsy misy maka ao amin’ny tranom-paty